काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकताले पूर्णता नपाउँदै विघटनको संघारमा पु¥याउने छिद्रहरुको खोजी भइरहेको छ । यस्ता छिद्रहरु खोजी गरेर सरकार र पार्टीलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम स्वयम् रक्षा मन्त्रालय सम्हालेका उप–प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गरेका छन् ।
आफै कार्यबाहक प्रधानमन्त्री भएको समयमा पोखरेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकको बचाउ गर्नुपर्नेमा त्यसैका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएर पानीमाथिको ओभानो हुनमात्र खोजेका छैनन्, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कुनै फरक मत नराखी बाहिर आएर डब्बल स्ट्याण्डर्ड पनि प्रस्तुत गरेका छन् । संसदीय प्रणालीअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्का हरेक सदस्यले जसअपजसको भागेदारी लिनु पर्छ । तर त्यसको ठीक विपरीत उनले प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई धोती लगाइदिएका छन् । यसरी उनले खेलेको संदिग्ध भूमिकाले स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै अप्ठ्यारोमा पु¥याएको छ ।
एकताको तगारा पोखरेल
पोखरेलको अहिलेसम्मका अभिव्यक्ति नेकपाको एकता सुदृढ गर्नेभन्दा विग्रह ल्याउनेमै उद्यत् छन् । उनी कहिले एकल अध्यक्षको वकालत गर्ने र पार्टीको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनेजस्ता कुराहरु अगाडि सारेर विशिष्ट परिस्थितिमा भएको एकतालाई भाँड्ने प्रयास गर्न बारम्बार तुरुप फाल्दै आउँदै गरेका छन् ।
्पार्टी एकताको समयको विश्वासलाई नजिक ल्याउन दुई अध्यक्ष र सचिवालयका दुई सदस्यको रोहवरमा भएको पाँच बुँदे सहमतिलाई उनले कहिल्यै स्वीकार गरेका छैनन् । यसप्रकारको विशेष सहमतिलाई पार्टीभित्र संस्थागत गर्दै लैजानु पर्ने भूमिका गर्नुपर्नेमा यसै माध्यमबाट पार्टी एकतालाई नै खारेज गर्न लागिपरेका छन् । पार्टी एकता भएपछि नै दुई पटक लगातार हारेको काठमाडौं क्षेत्र नं. ५ बाट पहिलोपटक जीत सुनिश्चित भएको कुरासम्म विर्सिएर उनले भष्मासुरको भूमिका खेल्दैछन् ।
जनताको बहुदलीय जनवादमा कहिल्यै खरो नउत्रेका पोखरेलले यतिखेर यो सिद्धान्तको सहारा पनि लिएका छन् । जबजप्रति उनको आशक्ति यति बढेको छ कि यो सिद्धान्तमा निर्लिप्त लागेका नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पनि मात खुवाएका छन् । उनले यतिखेरै जबजमा लिपापोती गर्नु र सिद्धान्तको दुहाइ दिनुपछिको रहस्य त्यसैको माध्यमबाट आफ्नो छुट्टै गुट तयार गरी विघटनको व्याड बनाउन खोजेका रुपमा कतिपयले अथ्र्याएका छन् ।
पोखरेलका अभिव्यक्तिहरुलाई कथित सिद्धान्तको दुहाई दिएर मदन भण्डारीका एकमात्र र सच्चा अनुयायी होलान् भनेर अर्थोक सोचियो भने राजनीतिको सावाँ अक्षर पनि नबुझेको ठहर हुन्छ । जनताको बहुदलीय जनवाद वा २१ औं शताब्दीको जनवाद वा समाजवाद कुनै धार्मिक शास्त्र होइन, जो सदाकाल, पिढीदरपिढी पाठ गरिंदै आउने सूत्र हुन् । बदलिँदो विश्व राजनैतिक परिस्थिति, परिवेश अनुसार निरन्तर परिमार्जन हुन सकेनन् भने यस्ता सिद्धान्तको अर्थ रहदंैन ।
तत्कालीन राजनैतिक शक्ति सन्तुलन, समसामयिक विश्व राजनैतिक परिस्थितिको राजनैतिक कार्यक्रम जबज अवश्य हो । तर, अहिले यो सिद्धान्तलाई रातारात अगाडि ल्याउनुको अर्थ यसैको माध्यमबाट नयाँ गुट निर्माण गर्ने र पार्टी विघटनको मुख्य हतियार बनाउने हो ।
राजधानीमा भइरहेको विरोधमा सरकारले एकातिर अश्रुग्यास र पानीको फोहरा फ्याँकिरहेको छ । अर्कोतिर सिंहदरबारभित्र बसेर कार्यबाहक प्रमको जिम्मा पाएका त्यही सरकारका बरिष्ठ मन्त्री गोहीको आँशु चुहाउँदै हिँड्छन् भने योभन्दा हास्यास्पद नौटङ्की के हुन्छ ?
सामान्य सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकउपर छलफल चलाएर परिमार्जन गर्नुलाई सामान्य अर्थमा लिन सकिन्छ । तर, विधेयकबारे स्वयम् सत्तारुढ पार्टीका सांसदले संसद हलमा प्रतिरक्षा गरिरहेका बेला उनले तिनको ऊर्जामाथि पनि पानी हालिदिए । अब कुनै दिन फेरि कुनै विषयमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्नुप¥यो भने ती सांसदले उल्लुका पठ्ठा हुने काम गर्लान् ?
गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल, मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा विज्ञापनमा देखिएका समस्या हटाउनु पर्छ । तर, पोखरेलले त विधेयकमाथि नै सार्वजनिक रुपमा चर्काे विरोध गर्नेहरुसँग नै ऐक्यबद्धता जनाउँदै छलफल चलाउन थालेपछि उनले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति भएको खण्डमा यो सरकारलाई कुनै पनि बेला भिरबाट हुत्याउन बेर लाउने छैनन् । अझ कार्यबाहक प्रम भएका बखत र प्रम आउने एकाध दिनअघि फरक धारणा प्रस्तुत गरेर अनौठो अभ्यास उनले गरे ।
फेरि उनले विधेयकरुपी विवादलाई सामान्यीकरण गरी जनपक्षीय सुधार गर्न थालेको कदमको रुपमा बुझ्नु भने अनौठो हुन्छ । पार्टीमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न उनले अरुलाई गोलखाँडी खुवाउनु पर्ने हुन्छ । पार्टीको महासचिव नपाएको तुष्टि पूरा गर्न र पार्टीमा विग्रह ल्याएर स्थापित हुन खोजेको षडयन्त्रको यो परम्परागत खेलोफड्कोको नमूना पनि हुनसक्छ । विधेयकको विरोध गर्ने पक्षले पनि राम्ररी बुझे हुन्छ, उनी यो तुरुपमार्फत् समस्याको समाधान गर्न होइन, आफूलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिरहेका छन् ।
सरकारको कामकार्वाही, पार्टीको तरल अवस्था, राजनैतिक कार्यक्रमको अभावले नेकपाका कार्यकर्तामा यतिखेर घोर निराशा छाएको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता बढेकोबढ्यै छ । विकास र समृद्धिको आधार तय गर्ने काम सुस्त छ ।
यस्तो समयमा सरकारमै बसेका बरिष्ठ मन्त्रीको गाईजात्रा सुरु भएको छ । व्यक्तिपिच्छेका गुटहरु संस्थागत हुने क्रममा छ । यस्तो बेलामा जता भत्क्यो त्यतै दैलो देखिनु स्वाभाविकै हो । यही अव्यवस्थाको लाभ लिएर आफूलाई फरक देखाएर ईश्वर पोखरेलले आफूलाई बलियो बनाउन खोजेका छन् । (समयबद्ध साप्ताहिकबाट)
२०७६ असार ३ मंगलबार ०८:०९:०० मा प्रकाशित